Inona no tokony ho fantatrao momba ny heloka bevava ara-bola any UAE
Moa ve ianao tafiditra amin'ny raharaha momba ny heloka bevava ara-bola any Emirà Arabo Mitambatra, sa liana fotsiny amin'ny lalàna Emirati momba ny heloka bevava ara-bola? Ity lahatsoratra ity dia milaza aminao izay tokony ho fantatrao momba ny heloka bevava ara-bola any UAE, ny lalàny ary ny fomba ahafahan'ny mpisolovava manampy anao.
Inona no atao hoe heloka ara-bola?
Araka ny hevitr'ilay anarana, ny heloka ara-bola dia manondro ny asan-jiolahy rehetra izay misy ny fakana vola na fananana izay an'olon-kafa mba hahazoana tombony ara-bola na matihanina. Noho ny toetran'izy ireo, dia tsapa maneran-tany ny fiantraikan'ny heloka bevava ara-bola, miaraka amin'ny haavo samihafa, arakaraka ny tanjaky ny toekaren'ny firenena tsirairay.
Araka ny International Compliance Association, dia azo zaraina ho sokajy roa lehibe ny heloka ara-bola:
Ireo izay natao tamin’ny fikasana hamokatra harena ho an’ireo mpanao ratsy, ary
Ireo izay nanolo-tena hiaro ny tombontsoa na harena azo tamin'ny heloka bevava teo aloha.
Iza no manao heloka ara-bola?
Olona samihafa no manao heloka bevava noho ny antony samihafa. Na izany aza, azontsika atao ny mametraka ireto olona ireto ho vondrona manaraka ireto:
Ireo izay manao be dia be fitaka hamatsy vola ny asany, toy ny mpanao heloka bevava voarindra toy ny vondrona mpampihorohoro;
Ireo mampiasa ny toerana misy azy handroba ny kitapom-bolan’ny fokontany misy azy, toy ny mpitondra fanjakana mpanao kolikoly ;
Ireo izay manodinkodina na manao tatitra diso momba ny angon-drakitra ara-bola mba hanomezana sary diso momba ny toerana ara-bolan'ny fikambanana iray, toy ny lehiben'ny orinasa na ny mpitantana ny C-Suite;
Ireo izay mangalatra ny volan'ny orinasa na fikambanana sy ny fananany hafa, toy ny mpiasa ao aminy, ny mpiantoka, ny mpamatsy, na ny “forces iraisan'ny mpiasa”, izay ahitana mpiasan'ny orinasa sy antoko mpisoloky ivelany;
Ny "operatera mahaleo tena" dia mitady hatrany ny fahafahana hanamaivanana ireo niharam-boina tsy misy ahiahy amin'ny vola azony.
Inona avy ireo karazana heloka bevava ara-bola?
Ny fanaovana heloka bevava ara-bola dia mety hitranga amin'ny fomba maro samihafa. Na izany aza, ny mahazatra kokoa dia:
Fisolokiana, ohatra, carte de crédit hosoka, hosoka finday,
heloka bevava elektronika
Tsolotra sy kolikoly
Fanararaotana amin'ny tsena sy varotra anatiny
Fanodinkodinana ny volan'ny orinasa,
Mivarotra drafitry ny fiantohana sandoka, fantatra amin'ny anarana hoe hosoka fiantohana
Inona avy ireo lalàna momba ny heloka bevava ara-bola any UAE?
Ny lalàna momba ny heloka bevava ara-bola Emirati dia mamaritra ny trangan-javatra heloka bevava ara-bola samihafa sy ny sazy manaraka azy ireo. Ohatra, ny andininy (1) amin'ny Andininy (2) ao amin'ny Lalàna Federaly No. (20) amin'ny 2018 dia mamaritra famotsiam-bola ary ny hetsika atao ho famotsiam-bola.
Na iza na iza mahafantatra fa ny vola teny am-pelatanany dia vola avy amin'ny heloka bevava na heloka bevava ary mbola minia manao ny iray amin'ireto hetsika manaraka ireto dia meloka famotsiam-bola:
Manao izay rehetra atao mba hanafenana na hanafenana ny loharanom-bola tsy ara-dalàna, toy ny famindrana azy na famindrana azy ireo.
Famadihana ny toerana na ny toetoetran'ny vola, ao anatin'izany ny fitondrany, ny fihetsehana, ny fananany, na ny zony.
Mandray ny vola sy mampiasa izany fa tsy mitatitra amin’ny tompon’andraikitra isan-tokony.
Manampy ny nanao ny heloka bevava na ny heloka bevava mba hialana amin'ny sazy.
Mariho fa ny Mihevitra ny famotsiam-bola i UAE ho heloka bevava mahaleo tena. Noho izany, ny olona iray izay voaheloka noho ny heloka bevava na heloka bevava dia mbola azo meloka sy saziana famotsiam-bola. Araka izany, hizaka tsy miankina ny sazy ho an’ireo heloka bevava roa ireo.
Sazy noho ny heloka ara-bola
Famotsiam-bola sazy hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina sy onitra AED 100,000 hatramin'ny 500,000. Raha tena goavana tokoa ny heloka bevava, dia mety hiakatra hatramin'ny AED 1,000,000 ny lamandy.
Ny tseky miboiboika dia mitondra sazy iray volana ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina, lamandy mitentina ary fanonerana ho an'ilay niharam-boina.
carte de crédit ny hosoka dia mitondra lamandy be ary fotoana lany any am-ponja
Ny fanodinkodinam-bola dia sazy onitra be, sazy an-tranomaizina eo anelanelan'ny iray volana ka hatramin'ny telo taona ary fanonerana ny niharam-boina.
Ny fisandohana dia sazy 15 taona an-tranomaizina na mihoatra, fandoavana lamandy mitentina ary fisedrana.
Heverina ho heloka bevava ny fangalarana ny maha-izy azy ary sazy sazy mitentina onitra, fisedrana, ary marika maharitra amin'ny firaketana heloka bevava ataon'ilay meloka.
Ny hosoka amin'ny fiantohana dia mitondra lamandy be.
Ankoatra ny famotsiam-bola, ny heloka ara-bola hafa dia mitondra sazy hatramin'ny telo taona an-tranomaizina sy/na onitra AED 30,000.
Aza iharan'ny heloka ara-bola.
Andeha hojerentsika izany: mihasarotra isan'andro ny heloka ara-bola, ary avo dia avo ny loza mety hitranga amin'ny iray. Na izany aza, raha manaraka fitsipika tsotra ianao, dia tokony ho afa-mandositra amin'ny heloka bevava ara-bola.
Hamarino mandrakariva ny orinasa na ny olona manolotra zavatra ho anao alohan'ny hividiananao;
Aza manome fampahalalana manokana na tsiambaratelo amin'ny finday;
Hamarino foana ny hevitra an-tserasera momba ny orinasa iray alohan'ny hividianana. Google no namanao akaiky indrindra;
Aza kitihina na oviana na oviana ny rohy na ny attachement misokatra amin'ny mailaka tsy nantenainao horaisina na avy amin'ny mpandefa tsy fantatra;
Aza manao fandoavam-bola amin'ny Internet na manao banky an-tserasera raha toa ka mifandray amin'ny Wi-Fi ho an'ny daholobe ianao, satria mora angalarina ny mombamomba anao.
Mitandrema amin'ny tranokala sandoka - jereo tsara ny rohy alohan'ny hanindry azy ireo;
Mitandrema amin'ny famelana olona hafa hampiasa ny kaontinao amin'ny banky;
Mitandrema amin'ny fifampiraharahana amin'ny vola be dia be, satria misy fomba fandoavam-bola azo antoka kokoa;
Mitandrema amin'ny fifampiraharahana izay mandrakotra firenena.
Ahoana no ifandraisan'ny heloka ara-bola amin'ny famatsiam-bola fampihorohoroana?
Andininy (3), Lalàna Federaly No. (3) Tamin'ny 1987 sy ny Lalàna Federaly No. (7) Tamin'ny 2014 dia manazava ny fomba fifandraisan'ny heloka ara-bola amin'ny famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana. Izay rehetra minia manao ny iray amin'ireto heloka bevava manaraka ireto dia meloka amin'ny famatsiam-bola fampihorohoroana:
Ny iray amin'ireo hetsika voalaza ao amin'ny andininy (1) amin'ny andininy (2) amin'ny lalàna ambony;
Raha fantatr'ilay olona fa an'ny manontolo na ampahany ny vola na natao hamatsiana fikambanana, olona, ​​na heloka bevava, na dia tsy nikasa ny hanafina ny fiaviany tsy ara-dalàna aza izy ireo;
Olona manome vola ho an'ny asa fampihorohoroana na famatsiam-bola ho an'ny fikambanana mpampihorohoro;
Olona nanome ny fomba hahazoana ny vola hampiasaina amin'ny asa fampihorohoroana;
Olona manao ny asa etsy ambony amin'ny anaran'ny fikambanana mpampihorohoro, mahafantatra tsara ny tena toetrany na ny fiaviany.
Fandinihana tranga momba ny heloka ara-bola
Tamin'ny taona 2018, tale Pakistani iray 37 taona ao amin'ny sampan-draharahan'ny banky iray no voampanga ho nanao izany. maka tsolotra 541,000 Dh avy amina mpandraharaha iray mpiray tanindrazana 36 taona. Araka ny fiampangana azy, dia nandoa ny kolikoly ilay mpandraharaha mba hividianany petra-bola tsy voaloa amin'ny orinasa enina isan-karazany izay nivarotra tao amin'ny tsenan'ny Pakistane saingy tsy nitakiana be, nandritra ny vanim-potoana samihafa.
Ity tranga ity dia ohatra mahazatra amin'ny kolikoly sy ny varotra anatiny. Soa ihany izy roa lahy, a Dubai Ny Fitsarana ambaratonga voalohany dia nanafaka azy ireo tamin'ny fiampangana rehetra ary nanafoana ny fitoriana sivily niampanga azy ireo.
Ahoana no ahafahan'ny orinasa mpisolovava antsika manampy amin'ny raharaha heloka bevava ara-bola?
Ny ekipan'ny heloka bevava ara-bola isam-paritra dia ahitana mpisolovava avy amin'ny lalàna sivily isan-karazany sy ny fari-piadidian'ny lalàna iraisana, teratany Arabo sy anglisy izay manana fahaizana iraisam-pirenena sy isam-paritra. Noho ity ekipa mahay ity, ny mpanjifanay dia mankafy ny serivisy feno ilainy, manomboka amin'ny fifampidinihana voalohany ka hatramin'ny famolavolana amin'ny teny Arabo na Anglisy, misolo vava any amin'ny fitsarana.
Fanampin'izany, manana fifandraisana akaiky amin'ireo andrim-panjakana eo an-toerana sy iraisam-pirenena ny ekipanay ary mampiasa matetika ireo fifandraisana ireo rehefa mikarakara ny raharahan'ny mpanjifa mifandraika amin'ny heloka ara-bola.
Ahoana no ahafahan'ny mpisolovava manampy amin'ny raharaha heloka bevava ara-bola
mpisolovava dia tena sarobidy amin'ny raharaha heloka bevava ara-bola satria manome torohevitra sy fanampiana amin'ny fanadihadiana momba ilay raharaha sy solontena ara-dalàna ho an'ireo antoko voarohirohy amin'ilay raharaha. Ho fanampin'izany, miankina amin'ny mombamomba ny tranga tsirairay, dia hiasa izy ireo mba hanesorana ny fiampangana na hamerenana ny fanonerana ho an'ny olona naratra.